Famerenam-bolan'ny rihana – FJKM Ambavahadimitafo Famerenam-bolan'ny rihana |
Nanao fivoriana ny Komity ny faha-10 taona mba handinihana ireo fomba hamerenana ireo vola nampindramina.
Tapaka ary fa hanao sakafo enti-mody izy ireo ny 18 Mai 2008 ka Ar. 10 000 no vidin’ny iray.
Hatao ao anaty lovia baoritra misarona izany ka azo entina mody.
Natao mirary tokoa nyvidiny mba hafahan’ny be sy ny maro mandray anjara. Ar 5 000 000 ny vola vinanina ho azo amin’io hetsika io.